phone_kyaw says: ( ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့ကော်မင့် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » phone_kyaw says: ( ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့ကော်မင့် )
phone_kyaw says: ( ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့ကော်မင့် )
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Feb 4, 2012 in Copy/Paste | 20 comments
ပိုစ့်ကဟိုဘက်စာမျက်နှာမှာကျန်ခဲ့ပြီ။ မမြင်လိုက်တဲ့လူများရှိမှာစိုးလို့ကူးပြီးပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တော်တော်လေးစော်ကားတယ်လို့ထင်လို့ပါ။ ဘိုးတင်ထားတဲ့စာကိုမကျေနပ်လို့ပါ။
ပြန်ညွန်းပေးလိုက်ပါတယ်( http://www.theninjaproxy.com/browse.php?u=Oi8vbWFuZGFsYXlnYXpldHRlLmNvbS85ODI5Ni91bmNhdGVnb3JpemVkLW90aGVyL2NvcHlwYXN0ZQ%3D%3D&b=13 ) ခုအချိန်နိုင်ငံရေးကရပ်နေတာလဲမဟုတ်အဆိုးဘက်ကိုသွားနေတာလဲမဟုတ် အကောင်းဘက်ကို
မသဲနုအေးရေ မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ ဗဟုသုတမရှိ မမြင်ဘူးမတွေ့ ဘူး မနာလိုစိတ်များတဲ့ ပညာမတက်တောသားများ ဖြေပေးကြပါ ဆိုတာ သူ့ကိုသူ ဘ၀င်ရူးဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာပါ……… တစ်ယောက်တည်းသီးသန့် ဖြစ်နေပြီဆိုရင် သတိထားပါ……….. မကြာခင် ရူးတော့မယ်လို့…… ဘုန်းကျော်ရေ …….. လောကမှာ မင်းတစ်ယောက်သာပါကွာ……. ဆက်ရူး ဆက်ရူး…….. ဘ၀င်ရူးရေ
ကျုပ်တို့ တောသားတွေဖက်ကနေ ကြိုကန်ထားရမယ်
မသိလို့နားမလည်တဲ့သူတွေကို အပြစ်ဖို့တဲ့ကောင်တွေ အကုန်းလုံး ကိုရှုပ်ချပါတယ်
( သူမှ မသိတာ ဘယ်လိုလုပ်နားလည်နိုင်မှာလဲ သူတို့တွေသိအောင်နားလည်အောင်ခင်ဗျားတို့
သိပါတယ်ဆိုပြီး ဘာမှမလုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုလည်း ရှုပ်ချပါတယ်
( စောက်ရူးတွေ သိပါတယ်ဘဲပြော ပြီးရပ်ကွက်လူကြီးလုပ်ခြင်တဲ့ကောင်တွေ )
ဒါကျုပ်တို့ တောသူတောင်သားတွေကို စော်ဂါးဒါ
ရတဲ့ လခ နှစ်ပဲတစ်ပြားနဲ့ ဒီဆိုဒ်ကိုဝင်ကြည့်တဲ့ဘော်ဘော်တွေ
ကျုပ်တို့လို စားဝတ်နေရေးမပြေလည်လို့ စည်းကမ်းကလနားမရှိနိုင်သေးတာကို
ထမင်းဝတိုင်းနဲ့ အော်နေတဲ့ကောင်တွေကို ချေမှုံးဂျ
မမြင်လိုက်တဲ့လူများရှိမှာစိုးလို့ ကူးပြီးပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ”
မ Thel Nu Aye တော်တော် စိတ်ဆိုးနေပုံရတယ် ။
” မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ ၊ ဗဟုသုတ မရှိ ၊ မမြင်ဘူး မတွေ့ဘူး ၊
မနာလိုစိတ် များတဲ့ ၊ ပညာမတတ် ၊ တောသားများ ဖြေပေးကြပါ ”
ဂုဏ်ထူး ဘွဲ့ထူး တွေက တစ်သီကြီးပဲ ၊ ၆ ချက်တောင် ။
အဘ ကတော့ သြဇီ မှာနေတာ ဆိုတော့ အဲဒီအထဲ
မပါလောက်ဘူး ထင်တာပဲ ။
ဟီ ဟိ နောက်တာနော် ။
စိတ်မဆိုးရှိမလားအဘဖောရယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး။ သူကဘာကောင်မို့လို့ဒီလိုစကားမျိုးပြောရတာလဲ။ သူ့ကိုမန့်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုဒီလိုစော်ကားတာသူကဘာတော်နေလို့လဲ။ ဘယ်လောက်တတ်နေလို့လဲ။ တောခိုတယ်ဆိုပြီးသူတို့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာလဲအရှက် မရှိပြောသေးတယ်။ သူစိတ်မှကောင်းသေးရဲ့လားမသိဘူး။
ထမင်းဝတိုင်းနဲ့ အော်နေတဲ့ကောင်တွေကို ချေမှုံးဂျ..မီးထုတ်..မီးထုတ်..ရှို့ ရှို့..မီးထုတ်..မီးထုတ်..ရှို့ ရှို့..
မီးထုတ်..မီးထုတ်..ရှို့ ရှို့..မီးထုတ်..မီးထုတ်..ရှို့ ရှို့..မီးထုတ်..မီးထုတ်..ရှို့ ရှို့..မီးထုတ်..မီးထုတ်..ရှို့ ရှို့..
မီးထုတ်..မီးထုတ်..ရှို့ ရှို့..မီးထုတ်..မီးထုတ်..ရှို့ ရှို့..x အကြိမ်ရေတစ်သိန်း…
အဲဒါတော့ သိဝူး။ သို့ပေသိ မြန်မာပြည်က နွားတွေကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်မှာ ဈေးကောင်းရဒယ်ဆိုလား…။ ဘွတ်အဲ ဘွတ်အဲ မြန်မာ့နွား ကမ္ဘာကို လွှမ်းစေရမည်…။
စကားကြွင်း။ ကိုဘေးနွားကင်အစား မြန်မာ့နွားကင် စားသုံးခြင်းဖြင့် မျိုးချစ်စိတ်ပြပါ။။
အင်း ဘယ်လိုပြောမလဲ အသိတရားလေးတောင်မရှိတာလား။ ဒါမှမဟုတ် လူတွေနဲ့ အတိုက်အခံလုပ်ပြီး ရွာထဲမှာ နာမည်ကြီး လူဇွာလုပ်ချင်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ မနောတော့ အဲဒီနာမည်နဲ့စာတင်တာကို ပထမဆုံးပိုဒ်တစ်ခုမှာပဲ ဖတ်ပြီး ကျန်တဲ့အချိန် အဲနာမည်ကို ရှောင်ဖတ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမြင်တွေမတူတဲ့အခါ ကိုယ်ပဲ ဒေါသထွက်ရ စိတ်ထဲ မခံရပ်နိုင်ဖြစ်နေမိတော့ ကြာရင်မလွယ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ နေတတ်အောင် နေတော့မယ်ဆိုပြီး မမြင်ချင်ယောင်ပဲဆောင်နေတော့တာပါ။
သတ္တိရှိရင် ဂျက်လီအီးပေနဲ့ဖိုက်မလား
သောက် ဇ မရှိပဲ နာ့အမရီးကို ချိတ်ချိုးအောင်လုပ်နဲ့ 
ကော်မင့်မဟုတ်ဘူး။ ကွန်မန့် ထ်လို့ အနီးစပ်ဆုံး အသံထွက်လို့ ရတယ်။
အဲ့ဒါတင်မကဘူး။ အကုန်လုံးနီးပါးကို ဖြစ်နေတာ :-)
ဆရာသမားတို့ ကို ယှဉ်လဲမရှင်ပါဘူး…
သူသာသိသူသာတတ်တယ်ဆိုတော့ သူ့ သာသမ္မတခန့် လိုက်ပါဗျာ။
ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက်လို့ ၊မရှက်မကြောက်ဒီစကားမျိုးပြော
ခင်များအရည်အချင်းလောက်ကတော့ဗျာ ကျွန်တော်က ခြေထောက်နဲ့ 
ရေးဖြေရင်တောင် ခင်များရထားတဲ့ဘွဲ့ မျိုးအခုတစ်ရာရအောင်လုပ်နိုင်
တယ်။မလောက်လေးလောက်စား ဖြုတ်ဦးနှောက်နဲ့ သူတောင်းစားရေ။
အင်း ကိုဘုန်းကျော်ခင်ဗျားခက်တော့တော်တော်ခက်နေဘီ။ ဗမာပြည်မှာလက်ရှိနေ နေ
ရှိသလို ဘက်ပေါင်းစုံက အတတ်ပညာရှင်မျိုးစုံရှိနေတယ်ဆိုတာလဲမမေ့နဲ.အုန်း။ခင်ဗျား
အယူအဆတွေကို ကျုပ်ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းစကားလုံးတစ်လုံးမှ မသုံးဘဲနဲ.ပညာရပ်ဆိုင်ရာနဲ.
ဆရာသမားတို့ ကို ယှဉ်လဲမရှင်ပါဘူး။ ပြိုင်လည်း မပြိုင်ချင်ပါဘူးဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျနော်ရေးတဲ့စာတွေကို မကြိုက်ရင် လာမဖတ်နဲ့ လေ။ ဘာဖြစ်လို့ များ စိန်ခေါ်နေချင်တာလဲ။ သူများစာတွေကို ဘယ်တုန်းကများ ကျနော် အားယားယား ခင်ဗျားတို့ လို ဝင်ပြီး မဆဲဘူး စိန်မခေါ်ဘူး မကဲ့ရဲ့ ဘူး။ မကြိုက်ရင် ဖတ်ကို မဖတ်တော့ဘူး။ အခုလဲ ဒီအတိုင်းပဲလုပ်ပါ။ ကျနော်ရေးတဲ့စာပဲ ကျနော်ကွန်မန့် ပေးပါတယ်ဗျာ။ မယုံရင် ရှာကြည့်ပါ။ သဲနုတို့ လို အိတုံတို့ လို အဘကပ်ပတိန်တို့ လို စသဖြင့် နေရာတကာမပါချင်ပါဘူးဗျာ။ ကိုယ့်အထာနဲ့ ကိုယ်နေစမ်းပါ။
နာ့ အဘတွေ့ ..နာအမရီးတွေက နင့်လို့နေရာတကာ မပါဘူးကွ တိရဲ့လား..
ကိုဘုန်းကျော်ရေ သူများကိုဝေဖန်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အဆင်နဲ့ အတန်းကိုလဲ
ငဲ့ပါအုံး။သူများတွေကို မနှိမ်ခင်ကိုယ့်စိတ်ကလေးကို နှိမ့်ချနိုင်သမျှ နှိမ့်ချလိုက်ပါ။
မဟောင်ပါနဲ့ ပြောနေမိတဲ့ကျနော်တို့ မှားနေပီ။
ကျုပ်အသက်ခင်ဗျားထက်အများကြီးငယ်တယ် လူငယ် မနေနိုင်လို.၀င်ပြောတာ ၀င်လဲ
မပါဝူး ၀င်လဲမပြောဘူး ဒါပေမဲ့မိုက်ရိုင်းစော်ကားလာတဲ့လူတွေနဲ.ဆိုရင်တော့ဝင်ပြောမိဒယ်
စိတ်ချ။ ခင်ဗျားပထမ ပို(စ်)ထဲကဆဲချင်နေတာ စိတ်လျှော့ထားတာ ခင်ဗျားလူပါးဝတဲ့
မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ ဗဟုသုတမရှိ မမြင်ဘူးမတွေ့ ဘူး မနာလိုစိတ်များတဲ့ ပညာမတက်တောသားများ
လို့လဲပြောသေးတယ် ဖြေပေးပါလို့လဲပြောသေးတယ်။ (ကိုဖုံးကင် အဲ့ ကို ဘုန်းကျော် တို့များ တော်တော်ပိန်းတာပဲ။) :-)
ကျွန်တော်တို့တော့ မဖြေတပ်ပါဘူးဗျာ။ :-) အဲ့ သိချင် ရင်တော့ ဘဘ ရွှေ တို့၊ ဘဘ စိန် တို့ကိုသာ သွားမေးနော် :-)